सेक्सलाई आनन्ददायक बनाउन कस्तो आसन उपयुक्त हुन्छ ? – Everest Dainik – News from Nepal
सेक्सलाई आनन्ददायक बनाउन कस्तो आसन उपयुक्त हुन्छ ?
Dog position.डग पोजिसनः डग पोजिसनबाट महिलाले सबैभन्दा बढी आनन्द पाउँछन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्न उनीहरू एकदमै लालायित हुने देखिएको छ । यसलाई सर्वाधिक लोकप्रिय सेक्स पोजिसन पनि मानिन्छ । प्रायः महिलाले आफ्नो पुरुष साथीले यही पोजिसनमा सेक्स गरोस भन्ने चाहना राख्छन् ।
Cow girl.काउगर्ल पोजिसनः महिलाहरूले रुचाउने अर्को प्रमुख सेक्स पोजिसन भनेको काउगर्ल पोजिसन हो । यो पोजिसनलाई सबैभन्दा सेक्सी पोजिसन पनि भनिन्छ । यो पोजिसनमा महिला पुरुषमाथि रहन्छन् अर्थात् पुरुष तल हुन्छन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्न रुचाउने महिलाहरूले आक्रामक सेक्स चाहन्छन्।
eye contact. मिसिनरी पोजिसनः यो पनि महिलाहरूले रुचाउने प्रमुख पोजिसन हो । प्रायःजसो सबै यौनजन्य क्रियाकलाप यही पोजिसनबाट सुरु गरिन्छ भन्ने मान्यता छ । यो पोजिसनमा आई कन्टयाक्टमा महिलाहरू बढी आकषिर्त हुन्छन् ।
Spoon. स्पुन्स पोजिसनः यो पोजिसनमा यौनसाथीहरू एक-अर्काको साइडमा चम्चा खप्टिएझैं गरी सेक्स क्रियाकलाप गर्छन् । यो पोजिसनमा सेक्स गर्दा लामो समयसम्म यौनक्रीडामा सहभागी हुन सकिने विश्वास गरिन्छ ।
स्ट्यान्डिङ पोजिसनः यो पोजिसन पनि धेरै महिलाले मन पराउँछन् । यसमा यौनसाथीहरू दुवै जना उठेर सम्पर्क गर्छन् । महिला उठेर भित्तातिर र्फकने र पुरुष पछाडि हुने यो पोजिसनबाट पनि बढी सन्तुष्टि पाइन्छ ।
डा. सुबोध पोख्रेलको पेजबाट